क्षेत्र बिस्तार गर्नुपर्छ ः दिनर्देशक. – Sabaikoaawaj.com
क्षेत्र बिस्तार गर्नुपर्छ ः दिनर्देशक.
बिहिबार, चैत्र ३१, २०७३ 10:23:15 PM	मा प्रकाशित
सुरेश राज अधिकारी, पोखरा, ३१ चैत्र / पश्मिाञ्चल क्षेत्रिय स्वाथ्य निर्देनशनालय डा. तारानाथ पौडेलले नेपाल परिवार नियाजन संघको क्षेत्र बिस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्की शाखाको ३८ औँ साधरण सभालाई सम्बोधन गदै पौडेलले सरकार चाहेमा परिवार नियोजनको भबिषय उज्जल हुने बताउदै राज्य संघियमा गएपछी बिस्तार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले परिवारको नियोजन संस्थाको नाम परर्वतन गरेर सेवा बिस्तार गरेर बालक देखी बृद्ध सम्म सेवा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । स्वाथ्यको बिषयमा उनले जनताहरुले सरकारले दिएको स्वाथ्य सेवाको पहुँचमा नपुगेको बताए ।
जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यलय अधिकृत बोधराज सुबेदि नेपालमा परिवार नियोजन सम्बन्धी हिजको जस्तो ब्यवस्था नरहेको वताउदै नयाँ गन्तब्यमा जनुपर्ने चुनैती आएको बताए ।
उनले परिवार नियोजन संघको पुर्व सम्लग्नाताको आवस्यकता रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका सामाजिक शाखा अधिकृत ओमराज पौडेलले नगरालिकाल संग समन्य नगरेता पनि उदाहरणीय काम गरेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा संस्थापक सदस्य बिश्वमहोन गनैचन, साधरण सदस्य तथा आजिवन सदस्य विश्व सिग्देल कास्की शाखा सचिब प्रकाह चन्द्र त्रिपाठी, कोषध्यक्ष रजनी केःसी, महिला सदस्य नानु रेग्मी लगायतले बोलेका थिए । नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्की शाखा अध्यक्ष अजुर्न सिग्देलको अध्यक्षता कार्यक्रम संचालन गरीएको सदस्य निशा भण्डारीले जानकारी दिईन् ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र ३१, २०७३ 10:23:15 PM